Imfihlakalo engaphendulwanga yabantu abangenayo imvelaphi engaziwayo, i-future and potential abilities
Uninzi lwaba bantwana bathanda ukufunda umbala wamaphepha adibeneyo ngeeCawa. Omnye umgca weklasi wawuyi "Ripley's Believe It okanye Not." Ihlala ibonisa ezinye iimbali ezintle okanye izinto ezihambelanayo . Ngokuqhelekileyo bekuya kuthetha ngabantu abaneempawu ezingavamile, iimpawu, okanye iimeko: umntu onesizukulwana sokuzalwa esesimo sengqondo epheleleyo esifubeni sakhe; ibhinqa elinekhanda lakhe elinjenge-Ming vase; Amawele aneendlebe ezintandathu phakathi kwabo.
Sasicinga ukuba siza kubelana ngamabali amangalisayo ngomoya omnye. Nazi ezi-7 zamabali amahle kakhulu kubantu abaninzi abangaqondakaliyo abavela kwimvelaphi engaziwayo, i-future or astonishing, amakhono angachazwanga.
Ngomnyaka we-1887, abantwana abancinci ababili bafunyanwa bodwa kufuphi nedolophu yaseBanjos, eSpain. Kodwa aba babengabantwana abaqhelekileyo ababelahlekile okanye balahliwe ngabazali. Ziye zafunyanwa ngezandla zasendle ezaphazamiseka emsebenzini wazo zikhala. Emva kokuphanda, bafumana inkwenkwe nentombazana encinane, besaba kwaye bekhala, bexhamle kufuphi nomnyango womqolomba. Ulwimi lwazo lwaziwa ngabasebenzi - ngokuqinisekileyo kwakungesiSpanish. Okumangalisa nakakhulu, bembethe izambatho ezenziwe ngendwangu engaqhelekanga ... kwaye isikhumba sabo sasine-tint eluhlaza.
Emva kokutshatyalaliswa kwidolophana ukunyamekelwa, le nkwenkwe yafa ngokukhawuleza kuba kwakunzima ukufumana enye yazo ukuba idle nantoni na. Kodwa le ntombazana yasinda, kwaye ekugqibeleni wayekwazi ukunxibelelana ngesiSpanish kunye nabanakekeli bakhe, wabatshela ukuba yena nomntakwabo bevela kwindawo eyayingenawo ilanga, kodwa lilizwe lokukhanya okungapheliyo.
Xa bebuzwa ukuba baba njani emqolombeni, wathi bavile umsindo omkhulu, baqhutyelwa "into," baza bahlala emqolombeni.
IBhayibhile ibhala ingxelo kaYona owagwinywa ngendwangu okanye intlanzi enkulu kodwa kamva wakhululwa kwilo lwanyana. Ngowe-1891, umkholosi waseBrithani wayehlala kwixesha elifanayo.
Amanqanawa angena emkhombeni whaling I-Star ye-East yazama ukubulala i-sperm whale enkulu kwaye ifike nayo. Ekulweni phakathi komntu kunye neenkomo, abahamba ngeenqanawa babedlala. Kodwa xa isisu somlwelwane nesibindi sasiqhutywe kwiqhekeza le nqanawa, kwaphawula ukuba into ehamba ngaphakathi esiswini. Ukuqhawula ukuvula isisu, abasebenzi bafumana uJames Bartley, omnye wamadoda alahlekileyo, ephihliweyo, engazi, kodwa ephila.
Ukulahleka kukaBernardo Vazquez
Ubeneminyaka engamashumi amabini ubudala uBernardo Vazquez wayekhathazekile ngokungaziwa kunye nomlingo omnyama, kunye nobutyebi. Abantu ababemazi eSan Juan, ePuerto Rico bathi unokuphumelela ngolu hlobo olumangalisayo olwamenza angabonakali. Emva kokubonisana neencwadi zakhe ngokusebenzelana nemimoya, ngelinye ilanga watshela unina ukuba wayefundile ukuba angabonakali - ngesithethe esingaqhelekanga esiquka inkathazi emnyama, ukhuni oluvela kwiphepha elidala kunye ne-tin. Wayekholelwa ukuba ngokubilisa ikati kunye nokusebenzisa ithambo eliye laphumela phantsi kweelwimi lwakhe wayengabonakali ngentando.
Ngobunye ubusuku wayezibethelela egumbini lakhe ngasemva kwendlu ukuze enze isithethe. Unina waba nexhala xa engazange aphume, waza wabiza amagunya.
Kwaye kwafuneka bangene egumbini lakhe apho bafumana khona iindawo eziphazamisayo zesithethe sakhe - imithi etshisa kunye nekati elimnyama. Kodwa uBernardo wayengenakufumaneka. Ngaba ngokwenene waba ngombonakalo ... okanye ngaba waphahlaka engaziwayo?
Ubungqina obumangalisayo nabunobungozi benedetto Supino beza kuluntu ekuqaleni kweminyaka yama-1980, xa wayeseneminyaka eli-10 ubudala. UBenedetto, waseFomia, e-Italy, unokubeka izinto ngokufudumala nje ngokuzikhangela. Ngokuqhelekileyo, amandla akhe okuqala umlilo ayengenangqiqo, ekhupha nje ngokuba khona kwakhe. Isiganeko sokuqala senzeka ngowe-1982 kwigumbi lokulinda wamazinyo. Ngaphandle kwesizathu okanye isilumkiso, incwadi yamahlaya uBenedetto wayefunda ngokukhawuleza umlilo.
Ngenye intsasa wavuswa ngumlilo ebhedeni lakhe - iipajamas zakhe zavutha umlilo kwaye le nkwenkwe yavutha kakhulu.
Kwesinye isihlandlo, into encinci yeplastiki eyayibanjwe ngezandla zikayisekazi yaqala ukutshisa njengoko uBenedetto ekhangele kuyo. Kuyo yonke indawo ayehamba ngayo, ifenitshala, iphepha, iincwadi kunye nezinye izinto zaziqala ukutshiza okanye ukutshisa. Amanye amangqina waze wachaza ukubona izandla zakhe zikhanya kule mizuzu.
I-Delphos Wolf Girl
Kukho amabali amaninzi ebantwaneni abavuthayo - abantwana abonakala bekhulile endle, ngamanye amaxesha izilwanyana kunye nokuziphatha ngendlela efana nesilwanyana - kodwa ibali legusha lentombazane elibona kufuphi neDelphos, eKansas kwiminyaka yokuqala yee-1970 mma ngaliso. Ukuxhamla, kusenokuba uxhulumaniso lwe-UFO.
Kwaqala ngoJulayi 1974 xa iingxelo zaqala ukuvela kwintombazana ekhangeleka kwimihlaba engama-10 ukuya kwe-12 ubudala. AmaNgqina athi wayeneenwele ezimhlophe kwaye enxibe iimpahla ezimvu. Emva kokubona, le ntombazana yayiza kubhidliza njengezilwanyana kuzo zonke ezine. Ngexesha lokukhangela intombazana ngabaphathi abasemaphandleni aseKansas ephakathi, abanye abantu bahlaselwa baza bahlatywa yintombazana.
Ubunxibelelwano obunokwenzeka be-UFO buqala ngokuqala kwiminyaka emibini ngaphambili ngo-1971 xa uRonald Johnson oneminyaka engu-16 ubudala ebiza ukuba wabona umhlaba we-mushroom owuhlobo lwe-mushroom endaweni ekhuni kufuphi neDelphos. Waphinda wathi ukubona i-UFO yalimele amehlo kodwa nayo yamnika amandla angqondo . Kwaye ngeli xesha wathi udibana nentombazana enesantyambo, eneentloko ezinamabhokhwe ezibalekele kuye kuzo zonke ezine. Ngaba yayingumfana omnye ... kwaye ngaba kukho uxhulumaniso kwi-UFO?
Ibali likaZana lenye yowesifazana, kodwa ibali lakhe lihlukile kunezinye.
Nangona abantwana abavuthayo bezilwanyana zasendle kunye nezilwanyana ngendlela yokuziphatha kodwa behlala bantwini, uZana ngokwenene wayebukeka engaphantsi komntu. Kufunyanwe phakathi kwe-1700s kwiphondo yaseRussia yaseGeorgia, uZana, njengoko wayebizwa ngokuba negama, wayenempawu ezinjengezinto ezinjengobunzima: iingalo ezinzima, imilenze, neminwe, kwaye yahlanganiswa ngeenwele. Abanye baye bacacisa ukuba wayeyindoda ye-Neanderthal race ... okanye mhlawumbi i- Bigfootkazikazi okanye umntu othile / i-hype hybrid.
Ukukhusela ukuGcina kunye nokuBakholelwa
Ikhaya likaDaniel Dunglas lingazange likwazi igama namhlanje ngathi nguHarry Houdini, kodwa mhlawumbi kufuneka abe. Enoba wayengomnye weengqondo ezinkulu ze-19th Century, okwazi ukubonisa ngokuphawulekayo (ezinye zithi i-paranormal), okanye wayengomnye wamagqirha amakhulu. Ngeentlanganiso, unokwenza ietafile ezinzima kunye nezihlalo (ngokuqhelekileyo nabantu abahleli kuzo). Ngaphandle kokubheka ngokukhawuleza, unokubeka izandla kunye nobuso bakhe ngamalahle abomvu ngaphandle kokulimala. Unokwenza ukuba akhule aze atyelele kwi-intshi ezili-12 ubude!
Kwimbonakaliso yakhe edume kakhulu, kuthiwa uye wanyuka kwifasitela yesakhiwo sezitezi ezine waza wavela ngaphandle kwewindow ekhangelelene nayo, apho yena wakhwela kuyo, ukumangalisa kwabaphulaphuli bakhe. Ngokungafani neendwendwe ezininzi zemihla yakhe, iKhaya yamkela ukuhlolisiswa ngabazinzulu kunye nabangenayo. Akukho namnye owakwazi ukubonisa ubungqina bakhe beengcambu okanye ukuchaza indlela awafeze ngayo.
(Kwakhona ubone: "Amandla Amangalisayo weDD Home" )
Iingqimba Zembewu: Ubungqina obugqwesileyo
Ngaba zivutha izitshizi okanye zi-Exothermic?
Iqela leMidlalo yeZizwe zeNdebe yeAfrika
Yiyiphi iSigqibo 4 seMgaqo-siseko kaMelika
UAnaximenes kunye neSikolo saseMilesian
I-Sand Dollar Iinkcukacha kunye nolwazi
I-Cuánto idibanisa i-papeles para los hijos de ciudadanos americanos
Uluhlu lweMidlalo yeMidlalo yeOlimpiki yamanje